संसदमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल जारी, कसले के भने ? – Nepal News
संसदमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल जारी, कसले के भने ?
काठमाडौं, जेठ ९ । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको दीर्घकालीन उद्देश्य प्राप्त गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारद्वारा प्रस्तुत भएको आव २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल आजबाट प्रतिनिधिसभामा शुरु भएको छ ।
दुबै छिमेकी मुलुकबाट नेपालले कसरी धेरै फाइदा लिनसक्छ त्यसतर्फ अझ छलफल गर्न आवश्यक रहेको धारणा उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
ट्याग्स: नीति तथा कार्यक्रम, संसद